Fahamehana ara-pahasalamana :: Hihiboka tanteraka ny faritra Atsinanana • AoRaha
Hikatona tanteraka mandritra ny dimy ambin’ny folo andro ny faritra Atsinanana. Hiala amin’ny fihibohana kosa, manomboka anio, ny any Matsiatra Ambony, raha hiverina tsikelikely amin’ny fiainana andavanandro ny eto Analamanga. Ireo no fepetra vaovao noraisin’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry manoloana ny ady amin’ny valanaretina eto amintsika sy taorian’ny fanalavana ny hamehana ara-pahasalamana ao anatin’ny dimy ambin’ny folo andro manaraka indray, araka ny tatitry ny Filankevitry ny minisitra, tamin’ny sabotsy lasa teo.
Nandritra ny fandaharana manokana niarahana tamin’ ny Filoha, afak’omaly alina, no nanamafisany an’ireo tarehimarika momba ny fitombon’ireo olona namoy ny ainy sy mitondra ny tsimokaretina « Covid-19 », ao Toamasina.
Voarara ny fivoahana sy fidirana ao amin’ny faritra Atsinanana. Ireo fiara mpitondra entana sy mpitondra solika ihany sisa no fantatra fa afaka mivezivezy, any an-toerana. Miato avokoa ny fampianarana ao amin’ny faritra Atsinanana, manomboka anio. Ho hentitra tanteraka ny fanaraha-maso an’ireo fepetra rehetra mikasika ny fihibohana ao Toamasina renivohitra sy ny manodidina. Tanjona ny hifehezana ny fihanaky ny « Covid-19 ».
Matsiatra Ambony sy Analamanga
Nahazo fankasitrahana manokana avy amin’ny Filoham-pirenena kosa ireo manampahefana sy vahoakan’i Matsiatra Ambony noho ny fahasitranan’ireo olona sivy voan’ny valanaretina sy ny tsy fisian’ny tranga vaovao intsony tao amin’ity faritra ity. Ny famoriana olona mihoatra ny dimampolo sisa no hany fepetra tsy maintsy arahin’ny any Fianarantsoa sy ireo distrika hafa miaraka aminy satria miverina amin’ny andavanandro tanteraka ny fiainan’ny mponina, manomboka anio.
Tsy dia lavitr’izay ihany koa ny eto Analamanga rehefa nampahafantarin’ny Filohan’ny Repoblika ny fanalefahana ny fepetra fihibohana eto, noho ny antson’ireo mpandraharaha sy tompon’ orinasa hatramin’ireo mpiasa tena. Hiitatra hatramin’ny 3 ora tolakandro ny asa amandraharaha, na miankina na tsy miankina amin’ny fanjakana ary ireo asa tenany.
Mitohy hatrany indray ny fampiharana an’ireo fepetra fihibohana any amin’ny faritra Alaotra Mangoro.
Baolina lavalava :: Foana avokoa ireo fifaninanan’ ny Rugby Afrika
Ady amin’ny « covid-19 » :: Hiezaka mafy hampitombo ny fitiliana ny governemanta